Izikhathi ezingathandeki empilweni yangempela zingadlulela emaphupho ethu. Ngokwezibalo zengqondo, ukubona ukuxabana ephusheni kuyisibonakaliso esicacile sokuthi umuntu ongenasidingo uhlose ukubonisa umuntu mayelana nokwephulwa okusobala kwesimo esinobuhle nokuntuleka kokuvumelana ngaphakathi kwalo. Futhi uma ukuphikisana nomuntu othandekayo kunephupho, ngakusasa ekuseni, ukukhathazeka kuyanda kuphela. Ekuchazeni ubuthongo, kanye nokuthi yini engxabano nomngane, cishe uzokwaziswa kule ngqungquthela.
Ngabe ososayensi bezengqondo bathi?
Namuhla, kunezincazelo eziningi zamaphupho ahlukene kakhulu, futhi ngezinye izikhathi zihluke kakhulu komunye nomunye. Lapha, isizathu kanye nokuqonda kokuhlangenwe nakho kokuhlwa kwesigqoko sethu esizansi sizokwembulwa.
Okokuqala, uma uvuka, kufanele ukhumbule isizathu sokungqubuzana, ukuze uqonde ukuthi ukuphikisana nomngane kuyini. Bese-ukuthatha izinhlangothi zonke zokungaboni kahle okuye kwavela, ngoba bobabili wena nomxhumanisi befuna ukuxhumana okuthile komunye nomunye. Mhlawumbe, okuhlangenwe nakho kwangaphakathi noma imibuzo ebilisayo kuzama ukuthola ukuphuma emaphupheni akho. Uma uzama ukuqonda umthombo wezinto zombili kokubili futhi ephusheni, ungakwazi ukuxazulula le nkinga, futhi amaphupho anjalo azophela ukuphupha.
Iphupho eliphindaphindiwe isikhathi eside lingathwala nabo uhlobo oluthile lokuhlukunyezwa kwengqondo, mhlawumbe kusukela ebuntwaneni. Ngakho-ke, kuyoba usizo ukukhumbula izithombe kusuka esikhathini esidlule, futhi mhlawumbe inkinga izoxazululwa ngokwayo.
Ukuze uqonde ukuthi kusho ukuthini, uma unengxabano nomngani, udinga ukubheka uhlangothi lomzwelo wephupho. Uma empilweni yangempela kwakukhona ukungqubuzana ngempela, ngakho-ke ingqondo uhlale ubuyela kulezi zinkumbulo futhi uzibonele. Mhlawumbe, masinyane sizoba nengxoxo ebalulekile nomngani. Ukuze wenze iziphetho ezifanele futhi ungavumeli amaphutha amasha, ingqondo enganaki ukuzama ukusiza ukwenza isinqumo esifanele mayelana nentombi yakho. Ngakho-ke, umuntu kufanele aziqonde ngokuzimela ubuhlobo obunzima naye, bese kuba sobala ukuthi ukuphikisana nomngane wakhe kuyini. Uma kwenzeka ukuthi kungekho mpikiswano, iphupho elinjalo lingalumkisa mayelana nokungavumelani okungenzeka nabantu abaseduze. Kufanele futhi uqaphele ukuzola kwabo ngokomzwelo, ngoba ukufutheka kwakho kungabangela ukuhlupheka kwengqondo.
Ezinye izincwadi zokuphupha zithi ukuxabana kuzoletha ukuthula nokuthula ebuhlotsheni empilweni yangempela. Yilokho, konke okuphambene nalokho. Uma umuntu ephupha ukuthi ubona kuphela ukuphikisana phakathi komngane nomuntu wesithathu, futhi engabambi iqhaza kuyo, empeleni kungabonisa ukubalekela emisebenzini yakhe yobuchwepheshe. Mhlawumbe impikiswano iyaqhubeka emsebenzini ngenxa yokuhluleka kwanoma iyiphi ibhizinisi ebalulekile. Futhi lokhu kwaziwa kulabo abaphupha leli phupho. Ungakhathazeki kulephupho, ngoba kungaba yisixwayiso.
Indoda, bezibuza ukuthi yini le mpikiswano nomngane wayo, ingalindela i-flash of passion phakathi kwabo. Ngezinye izikhathi leli phupho likhombisa ushintsho ebuhlotsheni bomuntu siqu kanye nezixwayiso zokuhlubuka kwesifo socansi bese kuguquka empilweni. Kungenzeka kungalindelekile ukuthi izinhlangothi zombili zizomangala ngalolu daba lwezenzakalo.
Kungani uxabana nomuntu owayengumfana?
Ngezinye izikhathi ukungqubuzana nomngane osondelene kusho ukutholakala okungenzeka kweqiniso elingathandeki abantu abangazi. Ikakhulukazi uma indima yomphikisi ingumfana osekuqaleni. Lokhu kusho ukuthi amacala angagcwaliseki, ashiywe ngaphandle kokulindelwe, zama ukuthola indlela yokuphuma futhi ulindele ukuxazulula okusheshayo.
Futhi, abahumushi abaningi bephupho bathi intombi yangaphambili iphupha ngokuhleba nezinkinga empilweni yakhe. Kodwa lokhu akufaki iqiniso lokuthi kungenzeka ukuxazulula ngokushesha ukuxabana okude futhi ubuyisele ubuhlobo obuseduze. Yonke into ixhomeke esimweni somzwelo sokulala - lezo zindaba eziphikisanayo ezaziphupho.
Ibhuku lephupho lomfazi
Uma iphupho elinjalo liphundulwa owesifazane oshadile, khona-ke libikezela ngokucacile ukungqubuzana okungenzeka nomlingani wakho, ngenxa yesisombululo lapho kuzofuneka khona ingqondo eminingi. Konke okuhunyushwa abahumushi ukuthi kufanele babe nesineke futhi babe ngokuvumelana nokusebenzisana nomyeni. Futhi, kufanele uqaphele kakhulu ngamazwi akho nezenzo zakho.
Ezinye izincwadi zokuphupha, okuyizinto eziningi, zithi, uma owesifazane ephikisana nentombi, khona-ke kulokhu kuphila, kufanele ulindele izinkinga ezihlukahlukene. Lokhu kungabangela ukuxabana, okuboniswa ngokuqondile ngephupho, nezinye izinkinga ezibonakala sengathi zivela ndawo.
Ukuze uqonde ukuthi ukuphikisana nomngane omkhulu kunjani , udinga ukuqonda kahle ubuhlobo naye empeleni. Iphupho elinjalo yisixwayiso mayelana nokuphulwa okungenzeka kokuxhumana okuhle futhi kukutshela indlela yokuziphatha empilweni yangempela.
Ngakho-ke, kungenzeka ukuqonda ukuthi ukuphikisana nomngani kuyini, kuphela uma uqonde ngokucophelela ubuhlobo nayo empeleni. Esikhathini lapho ubungane buqinile futhi bungathembeki, akufanele ukhathazeke ngephupho elinjalo. Uma kungenjalo, kuyakudingeka ukuhlolisisa umuntu oseduze futhi uqaphele ekukhulumeni naye.
Yini umuntu omnyama ephuphayo mayelana: ukuhumusha kwezincwadi ezahlukene zokuphupha
Nucleus: kuyini? Pho, yini okudingeka abafuyi bezinyosi Nucleus?
Ziyini izidingongqangi kwenqubomgomo isimo Russian emnothweni? Izinhloso nezinto ezazibaluleke kakhulu imigomo yezomnotho we Russian Federation
Indlela yokuhleleka kahle: amathiphu ambalwa awusizo
Amahhotela Torzhok: ukubuyekezwa. I ukhululekile kakhulu ehhotela Torzhok